Qisada haweenay uurleh oo ninkeeda naag kale u guurisay - ARAABINEWS.COM | ARAABINEWS.COM
Qisada haweenay uurleh oo ninkeeda naag kale u guurisay
Caatiqa waa haweenay hadda uurleh oo sida ilmihii shanaad isla markaana ayna jirin wax dhibaato ah oo is faham la’aana oo u dhexeeya iyada iyo ninkeeda. ”Waxaan ku noolahay nolol degan mana jirto dhib na haysaa ayay tiri Caatiqa.
Waxa caadi ah in haweenku marnaba ogolaan in ninkeeda lala wadaago inkastoo RABIGA uumey u ogolaadey inay xalaal u tahay ilaa Afar haddii ay ka bixi karaan shuruuda ku xiran.
Caatiqa ayaa xilli nolosheeda nugushahay ku fekertey inay ninkeeda u doorto naag kale oo ilaalisa hal gurina kuwada noolaadaan. ”Waxaan go’aansaday inaan adkeeyo dareenka ninkeyga xilligan aan uurka leehay inkastoo hore u diidanaa in layla guursado.
Waxa dhacda marmar inaan u baahanahay in gaari laygu riixo, waxaanan ku fekeray haddii taydii noqoto yaa caruurteyda iyo ninkeyga u miciina. Marka waa inaan helo mid noo wada miciinta dareenka ninkeyga ilaalisa.
Waxaan baraha bulshada kula saaxiibey haweenay la soo furey laakiin caruur haysan, waxaanan u soo jeediyay inaan u dhiso ninkeyga. Waa iga diidey markii hore laakiin wada sheekaysi aan muddo dheer socon way ku qanacdey inay nagu soo biirto, waxayna noogu timi guriga si ay noola afurto, waxayna aragtey farxada guriga taala.
Sidee arooska u dhacay
Waxaan samayney aroos fudud oo ayna ku bixin qarashaad badan, haddana way nala joogtaa caruurteyduna waa faraxsan yihiin, waxanan ku suganahay nolol farxadleh ayay tiri Caatiqa.
Xaaska cusub maxay ka qabtey in lala guursado
Waxaan ka mid ahaa haweenka sida xooga ah uga soo horjeeda in ninkeyga ila guursado naag kale laakiin markaan arkey sida naago badan oo ninkeoodu la qabo ugu noolyihiin nolol caadiya waan bedelay fikirkaas. Waxana taas ii dheer anagii oo hadda ku jira nolol raaxa leh.
Dhacdooyinka sidana waa naadir inkastoo laga yaabo inayna tii ugu horeysay ahayn laakiin qaabka ay u dhacdey ay noqon karto tii koowaad.